Aamin Ama Ha Aaminin..Arintan Adiga Ayey Kugu Dhacday. | Xaqiiqonews
Aamin Ama Ha Aaminin..Arintan Adiga Ayey Kugu Dhacday.
Macluumaadkani ayaa ah kuwa qofka cajab gelinaya waxaaba laga yaabaa in dadka qaar xitaa aysan rumeysanba, balse arinta saxda ah ayaa waxa ay tahay in macluumaadkani uu yahay mid la xaqiijiyey cilmi ahaan .
1_Ma ogtahay in Xaywaanada Cayaayaanka ah oo dhan xaywaanka ugu cimrigga dheer uu yahay Quraashada
daraasad la sameeyey ayaa lagu ogaaday in xaywaanada cayayaanada(xaywaanada aan dhiigga laheen) ah oo dhan xaywaanka ugu cimriga dheer uu yahay Xaywaanka loo yaqaan Quraashada.
2_Ma ogtahay Aqristow in qofka bani’aadamka ah nolashiisa oo dhan in uu si khalad ah u cuno 243 cayayaan
daraasad dhawaan la shaaciyey ayaa lagu ogaaday in qofka aadanaha cimrigiisa oo dhan uu si khalad ah u cuno 243 cayayaan, waxaan khaladkaasi uu noqon karaa in qofka oo afkiisa Furan uu si kadis u galo cayayaan biibaayo ama qofka uu cuntada u dhax galo uu sidaasi ku cuno.
3_Ma ogtahay in 100 sano hadda ka dib shirkadda facebook ay heyn doonto in ka badan 120,000000(boqol iyo labaatan milyan ) oo qof ooo geeriyootay ciwaankooda.
Daraasadan oo dad badan baraarujisay ayaa lagu ogaaday in boqol sano hadda ka dib shirkadda facebook ay ka diwaan gel sanaan doonaan ilaa boqol iyo labaatan milyan oo ciwaan dad geeriyooday waxaana laga yaabaa in uu ka mid noqon doono milkiilaha facebook.